တစ်ခုလပ်ဆေးဗိုလ်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ ဘာညာဘာညာဖြစ်နေတဲ့ နာဂတိုင်းရင်း သူလေး မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် မာရီကိုလ်း ရဲ့ အချစ်ရေးများ ပေါက်ကြား - Maythadin
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်လ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် မာရီကိုလ်း ကတော့ နာဂ လူမျိုး တိုင်ရင်း သူလေးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ခပ်ချေချေ မျက်နာပေးနဲ့ ???? ကျတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ စိုင်းစိုင်း ရဲ့”ဟိုက်ရှားပါး” ??? ရွှေထူး ရဲ့ “8 ???? 8 ?????? 8 ????? ” ??? သီချင်းတွေထဲက ခပ်မိုက် မိုက်
သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ??? သရုပ်ဆောင် လောကကို လွမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုဘက်မှာလည်း ဝါသနာပါ ထူးချွန်သူဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ပိုင် သီချင်းခွေ ???? ????? တခုထွက်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ ????? အပြတ်လန်းဖို့ ဘယ်လိုတောင် ???? ???? ကြိုးစား ?????? ချနေသလဲ ဆိုရင်တော့ အံဩလောက်
ဖွယ်ပါပဲ။ (၈)ရက်အတွင်း (၁၀)ပေါင်ကျော်ကျသွားတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကတော့သူမ ?????? ဆော့ဖြစ်နေပါတယ်။ မကြာသေးခင် ကလည်းသူမကြော်ငြာပေးခဲ့တဲ့ ??? အလှကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာဟာလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။သူမရဲ့ အချစ်ရေးသတင်းကတော့ တည်ငြိမ်နေတာကနေ
ယခုအခါမှာတော့ ဆယ်လီစုံထောက်ဟန်ငြိမ်းဦးက အခုလို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။နာဂ တိုင်းရင်းသူလေး မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မာရီကိုးလ် ဆို့အောက်သူ့ရဲ့ ချစ်ချစ်ကအခြားသူတော့မဟုတ်ဆေးဗိုလ်ကြီး တယောက်ပဲဆေးဗိုလ်က နာဂဒေသမှာဆေးကုပေးရင်းသူမကလည်းသူနာဂဒေသမှာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရင်း
ရေစက်ဆုံ ခဲ့ပါဆေးဗိုလ်ကြီးကတော့ကောင်မလေးကိုတော်တော်ချစ်ပုံပါပဲသူ့အမည်ရဲ့ နောက်မှာတောင်နာဂဆိုတဲ့အမည်လေး ထည့်ထားတယ်သူမကလည်း မာရီကိုးလ်နာဂ ဆိုတဲ့အမည်လေး ပေးထားတယ်ဆေးဗိုလ်ကြီးက လူပျိုတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ကအိမ်ထောင်ကျဘူးတယ်သားလေးတယောက်နဲ့
အိမ်ထောင်နဲ့က တရားဝင်ကွာရှင်းထားပြီးသားဖြစ်လို့ ပြသနာမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာ တယောက်နဲ့တယောက်က နားလည်မှုရှိရှိနဲ့သစ္စာရှိရှိချစ်နေဖို့ပါပဲ ဆိုပြီးဖော်ထုတ်လိုက်တာပါ ။ပရိတ်သတ်ကြီးရော သဘောတူရဲ့လားဆိုတာ ပြောပြခဲ့ ပေးကြပါဦးနော်။
ပရိတျသတျကွီးရေ မျောဒယျလျနဲ့ သရုပျဆောငျ မာရီကိုလျး ကတော့ နာဂ လူမြိုး တိုငျရငျး သူလေးဖွဈပွီး သူမရဲ့ ခပျခခြေေ မကျြနာပေးနဲ့ ???? ကတြဲ့ ကိုယျခန်ဓာအခြိုးအစားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားသူပါ။ စိုငျးစိုငျး ရဲ့”ဟိုကျရှားပါး” ??? ရှထေူး ရဲ့ “8 ???? 8 ?????? 8 ????? ” ??? သီခငျြးတှထေဲက ခပျမိုကျ မိုကျ
သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ ??? သရုပျဆောငျ လောကကို လှမျးမိုးနိုငျခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။အဆိုဘကျမှာလညျး ဝါသနာပါ ထူးခြှနျသူဖွဈတာကွောငျ့ ကိုယျပိုငျ သီခငျြးခှေ ???? ????? တခုထှကျဖို့ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။အဲ့ဒီ ????? အပွတျလနျးဖို့ ဘယျလိုတောငျ ???? ???? ကွိုးစား ?????? ခနြသေလဲ ဆိုရငျတော့ အံဩလောကျ
ဖှယျပါပဲ။ (၈)ရကျအတှငျး (၁၀)ပေါငျကြျောကသြှားတဲ့ လြို့ဝှကျခကျြကတော့သူမ ?????? ဆော့ဖွဈနပေါတယျ။ မကွာသေးခငျ ကလညျးသူမကွျောငွာပေးခဲ့တဲ့ ??? အလှကုနျပစ်စညျးကွျောငွာဟာလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားခဲ့ပါသေးတယျ။သူမရဲ့ အခဈြရေးသတငျးကတော့ တညျငွိမျနတောကနေ
ယခုအခါမှာတော့ ဆယျလီစုံထောကျဟနျငွိမျးဦးက အခုလို ဖျောထုတျလိုကျပါတယျ။နာဂ တိုငျးရငျးသူလေး မျောဒယျသရုပျဆောငျမာရီကိုးလျ ဆို့အောကျသူ့ရဲ့ ခဈြခဈြကအခွားသူတော့မဟုတျဆေးဗိုလျကွီး တယောကျပဲဆေးဗိုလျက နာဂဒသေမှာဆေးကုပေးရငျးသူမကလညျးသူနာဂဒသေမှာအကြိုးပွုလုပျငနျးတှေ လုပျရငျး
ရစေကျဆုံ ခဲ့ပါဆေးဗိုလျကွီးကတော့ကောငျမလေးကိုတျောတျောခဈြပုံပါပဲသူ့အမညျရဲ့ နောကျမှာတောငျနာဂဆိုတဲ့အမညျလေး ထညျ့ထားတယျသူမကလညျး မာရီကိုးလျနာဂ ဆိုတဲ့အမညျလေး ပေးထားတယျဆေးဗိုလျကွီးက လူပြိုတော့မဟုတျဘူးအရငျကအိမျထောငျကဘြူးတယျသားလေးတယောကျနဲ့
အိမျထောငျနဲ့က တရားဝငျကှာရှငျးထားပွီးသားဖွဈလို့ ပွသနာမရှိပါဘူးလကျရှိအခြိနျမှာ တယောကျနဲ့တယောကျက နားလညျမှုရှိရှိနဲ့သစ်စာရှိရှိခဈြနဖေို့ပါပဲ ဆိုပွီးဖျောထုတျလိုကျတာပါ ။ပရိတျသတျကွီးရော သဘောတူရဲ့လားဆိုတာ ပွောပွခဲ့ ပေးကွပါဦးနျော။